Instagram အီးမေးလ်ကို ပြောင်းပါ - VidaBytes | LifeBytes
Encarni Arcoya | 31/05/2022 08:28 | လဲ tutorial
ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုတော့ဘဲ အီးမေးလ်ဖြင့် လူမှုကွန်ရက်ပရိုဖိုင်ကို အကြိမ်များစွာ ဖန်တီးပါသည်။ ပြဿနာက လူမှုကွန်ရက်မှာ အဲဒီ အီးမေးလ်သာ ရှိရင်၊ သင်သည် အကြောင်းကြားချက်များကို လက်ခံရရှိမည်မဟုတ်သည့်အပြင် လိုအပ်ပါက ၎င်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင်လည်း ပြဿနာများရှိနိုင်သည်။. ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွန်ရက်တစ်ခုကို အာရုံစိုက်ပြီး Instagram အီးမေးလ်ကို မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကို သင်သိပါသလားဟု မေးပါမည်။
သင်သိချင်ပြီး ဘယ်မှာလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိနေနိုင်ပေမယ့် အဲဒါကို သင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မသိနိုင်ပါဘူး။ စိတ်မပူပါနဲ့၊ ငါတို့ အခုပဲ မင်းကို ကူညီမယ်။
1 Instagram အီးမေးလ်ကို ဘာကြောင့် ပြောင်းတာလဲ။
2 အက်ပ်မှ Instagram အီးမေးလ်ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
3 ကွန်ပျူတာတွင် Instagram အီးမေးလ်ကိုပြောင်းပါ။
4 အကောင့်မဝင်ဘဲ Instagram အီးမေးလ်ကို ပြောင်းပါ။
Instagram အီးမေးလ်ကို ဘာကြောင့် ပြောင်းတာလဲ။
Instagram အီးမေးလ်ကို ပြောင်းချင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။. သင့်အီးမေးလ်အကောင့်ကို ဟက်ခ်ခံရခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်၊ သင့်စကားဝှက်ကို သင်မေ့သွားသောကြောင့်၊ ၎င်းကို အသုံးမပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်... တကယ်တော့၊ ၎င်းကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင်တင်မဟုတ်ဘဲ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ပြောင်းလဲပစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ အင်စတာဂရမ်။
ပြဿနာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ စာရင်းသွင်းသည့်အခါတွင် အများအပြားက ၎င်းကို ပြောင်းလဲရန် မည်သည့်အဆင့်များ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အတိအကျ မသိကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ဒါက ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားရမယ့် အရာပါ။
အက်ပ်မှ Instagram အီးမေးလ်ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
မင်းသိတဲ့အတိုင်း, ယခုအခါ Instagram သည် သင့်အား မိုဘိုင်းလ်အပလီကေးရှင်းမှ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားသည်။ (အလွယ်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံးဖြစ်သည်)၊ ဒါမှမဟုတ် ကွန်ပျူတာကနေ. နောက်ပိုင်းမှာ မင်းမှာ အရာအားလုံးက အကန့်အသတ်ရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်းကို ပြောင်းလဲခွင့်ပေးမယ်။ ကဲ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် သွားကြရအောင်။
မင်းဒီမှာရှိတယ် ၎င်းကိုအက်ပ်မှပြောင်းရန် ညွှန်ကြားချက်များ. မင်းဘာလုပ်ရမှာလဲ?
ပထမဆုံး, သင့်မိုဘိုင်းတွင် Instagram ကိုဖွင့်ပါ။. ဖွင့်ပြီးသည်နှင့် သင့်ပရိုဖိုင်သို့ သွားပါ။ အထဲမှာ တစ်ခါ၊ "ပရိုဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရန်" option ကိုရှာပါ။.
အာရုံစိုက်ရင်၊ သင့်အီးမေးလ်သည် ပရိုဖိုင်အချက်အလက်တွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။. ထွက်မလာပါက၊ Contact Options ကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ထိုနေရာတွင် ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ဘာတစ်ခုမှ မရရင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ဆက်တင်တွေကို နှိပ်ပါ။ သင်စာရင်းသွင်းထားသည့် အီးမေးလ်သည် ထိုနေရာတွင် ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာက အဲဒါကို ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဘယ်လိုလဲ?
အီးမေးလ်လိပ်စာကို နှိပ်ပါ။. ၎င်းသည် သင့်တွင် သင်ထည့်ထားသည့် အီးမေးလ်ကို ဖျက်နိုင်ပြီး သင်လိုချင်သော အီးမေးလ်အသစ်ကို ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်ရရှိပြီးပါက အပြောင်းအလဲကိုလက်ခံရန် ညာဘက်အပေါ်ဘက်ဘေးဘောင်ကို နှိပ်ပါ။
Instagram သည် ယခုအကောင့်ကို အမှန်တကယ်လိုချင်ကြောင်း အတည်ပြုရန် သင့်အီးမေးလ်အသစ်သို့ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် လင့်ခ်ကို သင်မစစ်ဆေးပါက ထိုအီးမေးလ်ဖြင့် သင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့် လင့်ခ်ကို ပေးရပါမည်။
ကွန်ပျူတာတွင် Instagram အီးမေးလ်ကိုပြောင်းပါ။
သင်ဟာ ကွန်ပြူတာကနေတဆင့် ဒါကိုလုပ်ရတာကို နှစ်သက်သူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင်လည်း အဲဒါကို လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားပါ။ ပြီးတော့ အရမ်းလွယ်တယ်။ အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည် ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့ညွှန်ပြထားသည့် တူညီသောအဆင့်များကို လိုက်နာရန်ဖြစ်ပြီး ဤကိစ္စတွင် ကွန်ပျူတာမှ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ-
သင်၏ Instagram အကောင့်ကို ကွန်ပျူတာတွင် ထည့်သွင်းပါ။.
ဒေတာအတွဲတစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ၊ လိင်... နှင့် အီးမေးလ် ကဲ့သို့သော။
ကလစ်နှိပ်ပါ။, ဖျက်ပြီး အသစ်ထည့်ပါ။.
Instagram သည် ပြောင်းလဲမှုကို အတည်ပြုရန် သင့်ထံ အီးမေးလ်တစ်စောင် ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး သင်လုပ်ဆောင်ပြီးပါက လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး ပြီးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အကောင့်မဝင်ဘဲ Instagram အီးမေးလ်ကို ပြောင်းပါ။
Instagram မှာပါတဲ့ လှည့်ကွက်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ အကောင့်အတွင်းမ၀င်ဘဲ အီးမေးလ်ကို ပြောင်းရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။. ဥပမာ၊ သင့်မိုဘိုင်းလ် ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် သင့်တွင် အခြားအကောင့်များရှိပြီး ၎င်းကို သင်မသုံးချင် သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်အတွက် ဖြစ်လာပါက သင်လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များ Instagram အက်ပ်ကိုဖွင့်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။. မင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် မင်းရဲ့ access data ကိုတောင်းတဲ့အခါ၊ ပင်မခလုတ်အောက်တွင် သင့်အား အကူအညီတစ်ခုအား ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။. အဲဒီမှာနှိပ်ပါ။
ယခု ၎င်းသည် သင့်အီးမေးလ်၊ ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူအမည်ကို တောင်းဆိုမည်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ကိုပြောင်းလိုသော Instagram အကောင့်။
၎င်းသည်သင့်အားရွေးချယ်စရာများစွာကိုပေးလိမ့်မည်။: အီးမေးလ် (လင့်ခ်ချိတ်ထားသည့် အကောင့်သို့) စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ (SMS) ကို လက်ခံရယူပါ သို့မဟုတ် Facebook ဖြင့် စတင်ပါ။ သင်ရွေးချယ်သည့်အပေါ်မူတည်၍ ၎င်းသည် အနည်းနှင့်အများ မြန်ဆန်မည်ဖြစ်သည်။
စကားဝှက်ကို ပြောင်းလဲနိုင်သည့် မျက်နှာပြင်အသစ်ကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပေးထားသည့်အခိုက်အတန့်တွင်၊ ၎င်းသည် သင့်အား ၎င်း၏အီးမေးလ်ကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒီနေရာမှာ မင်းမှာရှိနေတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖျက်ပြီး မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ထားသင့်တယ်။
တကယ်တော့ သင်လုပ်ဆောင်တာက သင့်စကားဝှက်ကို မမှတ်မိတော့ဘူးလို့ Instagram က ထင်တာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ သင့်ရည်ရွယ်ချက်က အကောင့်မဝင်ဘဲ အီးမေးလ်ကို ပြောင်းလဲဖို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သင့်အကောင့်ကို လောလောဆယ်ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိတာကြောင့် မေးလ်ကို အရေးတကြီးပြောင်းဖို့ လိုအပ်ရင် အကြံကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
Instagram အီးမေးလ်ကို ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာ သင်သိပြီး လိုအပ်တဲ့အခါ သင်လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့်တွေကို သိလာပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » လဲ tutorial » Instagram အီးမေးလ်ကို ပြောင်းပါ။
facebook မှာ unblock လုပ်ပါ။